Mon, Apr 6, 2020 at 11:28am
फेरी ८ दिन थपियाे लकडाउन, अवतजावतमा थप कडाइ #आहा खबर# दुई हप्तापछि काेराेनालाई जितेर फर्किइन कनिका कपुर #आहा खबर# राष्ट्र बैंककाे नयाँ गर्भनरमा शिवाकोटी, अधिकारी र खनालको नाम सिफरिस #आहा खबर# चार पुरुष मृत फेला #आहा खबर# पहिलाे पटक बाघमा पनि देखियाे काेराेनाकाे संक्रमण #आहा खबर# काेराेनाकाे उच्च जोखिममा सुदूरपश्चिम #आहा खबर# थपियो कर बुझाउने म्याद, अब कुन कर कहिले बुझाउने ? #आहा खबर# लकडाउन वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याउने तयारी #आहा खबर# पाकिस्तानमा फैलिदै काेराेना महामारी, एकै दिनमा ६ जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# लकडाउनमा इँटा उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै झडप, प्रहरीसहित १३ जना घाइते #आहा खबर# कोरोनाका कारण लिवियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको मृत्यु #आहा खबर# डोनल्ड ट्रम्पले मागे भारतसँग मलेरियाको औषधी #आहा खबर# आजदेखि धनगढीका बजार पूर्ण रुपमा बन्द #आहा खबर# मनाङबाट फर्किन मानेनन् विदेशी पर्यटक #आहा खबर# लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस, अझै कति दिन लम्बिएला ? #आहा खबर#
काठमाडौं, ८ माघ । एनसेल प्रालिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा विदेशी पर्यटकरुलाई ‘टुरिस्ट सिम’ दिने भएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकले अब एनसेलको नयाँ योजना ‘टुरिस्ट सिम’मार्फत कम्पनीका विशेष सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने छन् । एनसेलले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा ल्याएको योजना माघ ८ गते बुधवारबाट सञ्चालनमा आएको हो ।
योजनाअन्तर्गत भ्रमणमा आएका विदेशी पाहुनाले सजिलै टुरिस्ट सिम लिएर सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने ‘अल नेटवर्क टक टाईम’ र ‘डेटा बण्डलिङ’ गरिएको प्याकहरू लिन सक्छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका कुनै पनि पर्यटकले करसहित मात्र १०० रुपैयाँमा टुरिस्ट सिम सहितको स्टार्टर प्याक लिन सक्छन् । प्याकमा पर्यटकले ३० रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स र ३ दिन समयावधि भएको १ जीबी डेटा पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
टुरिस्ट सिम एनसेलका एनसेल सेन्टर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एनसेल काउन्टर र देशका विभिन्न भागमा रहेका ९० वटा पोइन्ट अफ सेल्सहरूबाट लिन सकिनेछ । यो सिम लिनका लागि पर्यटकले आफ्नो एक थान पासपोर्ट साइज फोटो र पासपोर्टको फोटो कपि बुझाउनुपर्ने छ ।